အိုးဝေ: နာမည်ပေး၊ ကင်ပွန်းတပ်
Posted by မောင်ဖြူ at 9:25 AM
ညီမ June 20, 2008 at 11:44 AM
ကိုမောင်ဖြူ့သမီးလေးကိုဆို ''ဖြူစွတ်နုမွတ်ညက်ညက်ညော'' လိုနာမည်မျိုးတွေပေးနေမလား...:P
မဇနိ June 20, 2008 at 1:11 PM
ကိုမောင်ဖြူတို့ပြောမှ နာမည်ကိစ္စ သတိထားမိတော့တယ်။
ကိုအန်ဒီက ကလေးရှိလို့နာမည်စဉ်းစားတာကို ကိုဇနိတို့ ကိုမောင်ဖြူတို့က ဘာလို့ထပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေကြတာလဲ မသိပါဘူးနော်။ အားကျရင်လည်း အရင်စွံအောင်လုပ်ကြအုံး လူပျိုကြီးတွေ အဆင့်မကျော်နဲ့လို့။။။
ဇနိ June 20, 2008 at 1:26 PM
ပထမ ကိုဖြူရေ အွန်လိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ nick ရွေးတာ ကိုဖြူပြောသလို..မိုက်တိုင်ဆိုင်တွေ လူဖလန်တွေဆိုရင်...ကိုဖြူဆိုတဲ့နာမည်မြင်တာနဲ့လည်း မောင်မဲဖြစ်မယ်လို့ နှလုံးသွင်းသူတွေ သွင်းသွားကြမယ်နော်...မောင်ဖြူ(တကယ်ဖြူ) ဆိုပြိး နောက်က ထပ်ရေးမှထင်တယ်နော..
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ကျနော်တို့နယ်ဘက်တွေမှာ ရှိတတ်တယ်... ဦးဆင်၊ ဒေါ်ဝက်မ သား ကိုပြောင်ကြီး ဆိုတာမျိုးပေါ့၊ သူတို့တွေကျ ဘာလို့ အဲသလိုတွေပေးလဲ မသိနော်...တချို့ဆို မခွေးမ တဲ့။ ကြီးလာတော့ ဒေါ်ခွေးမ။
ဒေါ်ခွေးမကိုဆို ခေါ်သာခေါ်ရတာ စိတ်ထဲက အားနာနေတာ။
မဇနိကလည်းဗျာ... အခုမှ အဲလိုကြီးမပြောနဲ့လေ
အစက နှစ်ကိုယ်တူ စိတ်ကူးတွေယဉ်ခဲ့ကြတာလေဗျာ..
မေအောင် June 20, 2008 at 4:14 PM
ခဏတွင်း အောင်မြင်နိုင်သည့် ကလောင်မျိုးကိုရှာကြသည်။ ”
khin oo may June 20, 2008 at 9:41 PM
ဘု.စု. ခရု ပါဆို. သုံးယောက်စာ တို.ရွေးထားတယ်။ တစ် ယောက်မှ မမွေးလို. ကိုယ်ရွေးထားတာလေးနှမျောလိုက်တာ။ မဇနိကိုပေးတေားလဲ မယူ.ခက်တာဘဲ.
မင်းကျန်စစ်။ June 21, 2008 at 2:58 PM
အားပါးပါး ရေးထားတ စုံလိုပဲ။ တယ်လဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာနိုင်ပါပေ့ဗျာ။
htin December 8, 2009 at 5:25 AM
ကျွန်တော့အမည်မှာ ထွန်း ပါတယ်
ဇနီးက ကချင်ဆိုတော့ အမည်မှာ ကော့ ပါတယ်အဲဒီတော့ သမီးအမည်ကို
စပ်စုထွန်းကော့ လို့အမည်ပေးထားတယ်